WARBIXIN: Sababaha Uu Ciyaartoy Kasta Oo Kamid Ah Tobanka Xiddig Ee Kusoo Baxay Liiska Abaalamarinta Xiddiga Sanadka Ugu Fiican Iyo Cadaynta Uu Xidig Kastaa U Haysto In Uu U Qalmo. - GOOL24.NET
WARBIXIN: Sababaha Uu Ciyaartoy Kasta Oo Kamid Ah Tobanka Xiddig Ee Kusoo Baxay Liiska Abaalamarinta Xiddiga Sanadka Ugu Fiican Iyo Cadaynta Uu Xidig Kastaa U Haysto In Uu U Qalmo.
July 25, 2018 Apdihakem Omer Adem
Hay’ada ugu saraysa kubadda cagta caalamka ee FIFA ayaa shalay si rasmi ah u shaacisay tobanka xiddig ee ku loolamaya abaalmarinta xiddiga sanadka iyadoo ay liiskan kusoo baxeen xiddigo shaqyo weyn usoo qabtay kooxahooda iyo qaramadooda labadaba.
Raphael Varane ayaa ah daafaca kaliya ee ka dhex muuqda liiskan kaddib markii uu si cajiib ah ugu soo wada guulaystay UEFA Champions League iyo Koobka Aduunka waxaana uu noqon karaa daafac mara wadadii Fabio Cannavaro oo ku guulaystay abaalmarinta xiddiga aduunka sanadkii 2006 kaddib markii uu hantay koobka aduunka.
Xiddigaha kala ah Harry Kane, Eden Hazard, Kylian Mbappe, Luka Modric iyo Antoine Griezmann ayaa iyaga qudhoodu shaqo weyn soo qabtay xilli ciyaareedka gaar ahaan koobkii aduunka ee kasoo qabsoomay dalka Ruushka, Waxaan meesha ka maqnayn mucjisada lamaanaha ah ee tobankii sano ee u dambeeyay kasoo talinayay kubadda cagta ee Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo.
Haddaba waxaan halkan kusoo qaadan doonaa tobanka xiddig ee u tartamaya abaalmarinta xiddiga sanadka iyo daliilka uu midkasta u haysto isla markaana u cuskanayo hanashada abaalmarintan.
1: Cristiano Ronaldo – Juventus & Portugal
Cristiano Ronaldo ayaa xilli ciyaareedkii saddexaad oo xidhiidh ah noqday gool dhaliyaha ugu sareeya ee tartanka UEFA Champions League, Sidoo kale waxa uu xilli ciyaareedkii saddexaad oo xidhiidh ah hantay isla tartankaas, Dhinaca kale Ronaldo ayaa shaqsiyan ugasoo dhalaalay koobkii aduunka walow uu xulkisu xilli horeba hadhay, 33 Jirkan ayaa saddexley taariikhi ah ka dhaliyay xulka Spain.
2: Lionel Messi – Barcelona & Argentina
Lionel Messi ayaa hantay abaalmarinta goodhalinta ee horyaalka La Liga ee Pachichi markii shanaad, Messi ayaa qayb libaax ka qaatay labadii koob ee maxaliga ahaa ee ay kooxdiisu qaaday xilli ciyaareedkii hore isagoo 54 kulan ku dhaliyay 45 gool Laakiin Messi ayaa dhib kala kulmi kara waji gabaxii Koobka Aduunka iyo UEFA Champions League.
3: Antoine Griezmann – Atletico Madrid & France
Antoine Greizmann ayaa soo qaatay xilli ciyaareed aad u qurux badan waxaana uu kooxdiisa Atleytico Madrid u suurogaliyay hanashada UEFA Europe League halka uu door muhiim ah kasoo ciyaaray hanashadii koobka aduunka ee xulkiisa France.
4: Luka Modric – Real Madrid & Croatia
Luka Modric ayaa sanadkan 2018 si weyn isku muujiyay isla markaana uu soo bandhigay qaab ciyaareedkii ugu fiicnaa waayihiisa kubadda caagta, Modric ayaa muhiim ka ahaa kooxdii Real Madrid ee hanatay Champions League markii saddexaad oo xidhiidh ah halka uu xulkiisa Croatia ka caawiyay inay soo gaadhaan kulanka kama dambaysta ah ee Koobka Aduunka.
5: Raphael Varane – Real Madrid & France
Raphael Varane ayaa u muuqda nin da’ yaraan ku shaqaystay isagoo hantay afar UEFA Champions League iyo Koobka Aduunka walow uu jiro kaliya 25 sano, Raphel Varane ayaana haysta cadayn weyn maadaama oo uu soo wada hantay labada koob ee xiddig kasta ku hamiyo.
6: Kylian Mbappe – Paris Saint-Germain & France
Mbappe ayaa xubin muhiim ah ka ahaa Paris Saint-Germain sanadkii hore isaga oo hoggaanka kooxda noqday kaddib dhaawacii Neymar, Mbappe ayaa kooxdiisa usoo dhaliyay 21 gool isla markaana ka caawiyay inay hanato saddexley koobab ah oo maxali ah laakiin Mbappe ayaa markale si weyn uga soo hilaacay koobkii aduunka isaga oo afar gool soo dhaliyay, 19 jirkan ayaa sidoo kale loo magacaabay da’yarkii koobka aduunka.
7: Harry Kane – Tottenham Hotspur & England
Harry Kane ayaa ah xiddiga goolasha ugu badan soo dhaliyay sanadkii hore ee 2017 isagoo inta badan goolashaas dhaliyay qaybtii hore ee xilli ciyaareedka oo loo xisaabinayo abaalmarinta sanadkan, Kane oo 56 gool soo dhaliyay sanadkaas ayaa sidoo kale hogaan u noqday xulkii da’yarta u badnaa ee England u matalayay koobka aduunka waxaana uu markale halkaas ku muujiyay awoodiisa gool dhalineed isaga oo soo dhaliyay lix gool oo uu ku hantay abaalmarinta kabta dahabka ah ee koobka aduunka.
8: Eden Hazard – Chelsea & Belgium
Hazard ayaa xilli ciyaareed adag lasoo maray kooxdiisa Chelsea isaga oo soo dhaliyay 17 gool halka uu soo caawiyay 13 kale, Balse Hazard ayaa tagay dalka Ruushka si uu kaalinta saddexaad ugu hoggaamiyo xulkiisa markii ugu horaysay taariikhdooda.
9: Mo Salah – Liverpool & Egypt
Mohamed Salah ayaa la heer ahaa Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi xilli ciyaareedkii hore isaga oo kooxdiisa ku hoggaamiyay Final-ka Champions League isla markaana kusoo guulaystay abaalmarinta kabta dahabka ah ee horyaalka Premier League, Salah ayaa guud ahaan soo dhaliyay 44 Gool.
10: Kevin De Bruyne – Manchester City & Belgium
Kevin de Bruyne ayaa muujiyay sabab loogu tilmaami karo khadka dhexe ee ugu fiican kubadda cagta wakhti xaadirkan isaga oo soo caawiyay 21 Gool halka uu qayb ka ahaa kooxdii Manchester City ee dhigtay rekoodhka 100-ka dhibcood ee Premier League.